Ciidamada Xooga Dalka ayaa ka qeyb qaadanaya la dagaallanka cudurka Corona - Ka hortagga Korona
Ciidamada Xooga Dalka ayaa ka qeyb qaadanaya la dagaallanka cudurka Corona
Post author By Moulid Hujale
Ciidamada xooga dalka ayaa ka qeyb qaadanaya Ololaha qaran ee lagula dagaallmaayo cudurka Fayrsaka dilaaga ah ee loo yaqaanno Covid19.
Sida looga bartay markasta oo ay musiibo qaran dhacdo, ciidamada xooga dalka waxay qeyb libaax leh ka qaataan samata-bixinta ummadda Soomaaliyeed.
Iyagoo gudanaya waajibkooda qaran ayaa waxay bilaabeen inay wacyigelin u sameeyaan bulshada ku dhaqan xeryaha Barakacayaasha caasimada Muqdisho. Waxay sidoo kale u qeybiyeen maaskiyo afka lagu xirto maadaama aysan gadan karin.
Xarumahaan oo ay ku suganyihiin boqollaal kun oo qof ayaa haysan hoy fiican. Waxay ku noolyihiin cooshash cidhiidhi ah mana haystaan biyo iyo raashiin ku filan.
Wasaaradda caafimaadka waxay xaqiijisay in cudurkan uu saameeyay 873 oo qof halka 39 qof kalena ay u dhinteen ilaa haatan. Balse waxaa la aaminsanyahay in tirada ay intaa ka badantahay maadaama la baaraayo kaliya dadka lasoo xiriira xarunta baaritaanka dowladda.
Sidoo kale maadama ay dowladdu haysan qalab baaritaan ku filan uma suuro galeyso dhamaan shacabka Soomaaliyeed in la wada baaro. Sidaa darteed waxaa muhiim ah in qof walba la gaarsiiyaa fariin caafimaad oo ku aadan Fayraska Corona si looga hortago faafitaankiisa.
Nasiib darro Fayraska waxuu ku badanyahay caasimadda Muqdisho hadana dad badan oo bulsahda ka mid ahi wali ma aaminsanna in uu cudurka ku dhici karo.
Sidaa darteed ayey Ciidanka Xooga dalka qeyb uga yihiin ololaha qaran oo lagu doonaayo in ummadda lagu fahansiiyo dhibaatada uu leeyahay cudurka si ay uga foojignaadaan.
Ololahan waxaa suuro galiyay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay’adda UNDP.
← ‘Waxaan ka mid ahay bukaannada qaba coronavirus ee ku jira isbitaalka Martiini’ → Naciima Abwaan Qorane oo Gabay ka tirisay halista uu leeyahay cudurka Corona